आफ्नाे लागी धेरै अवसर प्राप्त गर्ने तरिका यस्ता छन् ! – सजल सन्देश
आफ्नाे लागी धेरै अवसर प्राप्त गर्ने तरिका यस्ता छन् !
By Sajal sandesh	 On१० आश्विन २०७६, शुक्रबार ०२:३२
अरूकाे नक्कल नगर्नुहाेस् । अरूकाे नक्कल गर्दा सुरूमा त तपाइ राम्राे देखिन पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसले तपाइ प्रति मानिसहरूकाे नकारात्मक धारणा बन्र सक्छ । त्यसैले सिर्जनात्मक बन्रुहाेस् । आफुले गरी रहेकाे काममा तपाइकाे आफ्नाे क्षयमता, साेचलाइ पनि देखाउनुहाेस् । यसले गर्दा तपाइकाे छुट्टै परिचय बन्र सक्छ र नयाँ अवसरहरू आउँछन्
वैज्ञानिक खोज : मृत मानव शरीर एक वर्षसम्म चलायमान हुने
समुद्रशास्त्र अनुसार शरीरको कुन अंगमा कोठी भएका व्यक्ति कस्तो हुन्छन ?